ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ - သူရဲကောင်းတစ်ဦး၏ ခရီးစဉ်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယလူမျိုးများကို ပုံပြင်များ ပေးအပ်ခြင်း။
တနင်္ဂနွေ၊ ဇွန်လ 26 2022
ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော တာယာများမှ ရှူးဖိနပ်များဖန်တီးရန် ဆယ်ကျော်သက်လူမှုရေးလုပ်ငန်းရှင်သည် ဒေသခံ ကြမ်းပြင်သမားများကို အလုပ်ခန့်ထားသည်။
ဘာကလေ၏ ပထမဆုံး စကားပြောမဟုတ်သော ဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ကနေဒါမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Maya Burhanpurkar သည် အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်သို့ ဦးတည်သွားခဲ့သည်။
မတည်ငြိမ်မှု၊ မသေချာမှု၊ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးမှု
ဤရာဇဝင်သစ်တွင်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယGI Youth၊ အိန္ဒိယလူမျိုးများသည် အဆုံးစွန်သော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ ဖန်တီးနေပြီး ၎င်းတို့၏ စွမ်းပကားဖြင့် လုပ်ငန်းများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိပါသည်။ သွေးခုန်နှုန်းကို ဒီမှာ ခံစားပါ။
Global Indian Youth မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ခရီးအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။
သင့်အမြင်များကို မျှဝေပါ၊ သင့်ဇာတ်လမ်းကို ပြောပြကြပါစို့။
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | အထူးသီးသန့်ဇာတ်လမ်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှ သုတေသနပြုပြီး ရေးသားထားသော ဇာတ်လမ်းများ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသီးသန့်၊ အမေရိကန်ရှိ အိန္ဒိယလူမျိုးများ Namrata Srivastava မှရေးသားခဲ့သည်
လုပ်ဆောင်ချက်နိမ့်ကျသည်ဟု ခေါ်ခြင်းမှ သမိုင်းဖန်တီးခြင်းအထိ၊ Hari Srinivasan သည် ခရီးဝေးသို့ ရောက်လာခဲ့သည်။
စာဖတ်ချိန် -5အောင်မင်း
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယလူငယ်၊ အိန္ဒိယလူမှုရေး လုပ်ငန်းရှင် Darshana Ramdev မှရေးသားခဲ့သည်
Divya Sijwali- ဆယ်ကျော်သက် လူမှုရေးစွန့်ဦးတီထွင်သူ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယလူငယ်၊ တီထွင်သူ Darshana Ramdev မှရေးသားခဲ့သည်
Maya Burhanpurkar- ဟားဗတ်၏ ဝှီးဇဉ်ကလေးသည် Rhodes Scholar အဖြစ် အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်သို့ သွားသည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသီးသန့်၊ အမေရိကန်ရှိ အိန္ဒိယလူမျိုးများ Namrata Srivastava မှ ပြုစုသည်။
အိန္ဒိယ-အမေရိကန်တွေနဲ့ US Spelling Bee ပြိုင်ပွဲက ဘာလဲ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသီးသန့်၊ တီထွင်သူ Charu Thakur ရေးသားခဲ့သည်
Zain Samdani- တီထွင်သူ၏ စက်ရုပ်လက်အိတ်သည် လေဖြတ်သောလက်ရှိ လူနာများကို ကူညီပေးနေသည်။
Seher Taneja- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို တော်လှန်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆယ်ကျော်သက် တီထွင်သူ
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | US အတွက် ရေးပါ။
သင့်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယလူမျိုးများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားမှ အိန္ဒိယလူမျိုးများကို ခေါ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားစရာ သို့မဟုတ် အိန္ဒိယလူမျိုးစုအတွက် အရေးကြီးသည့် ဇာတ်လမ်းများ သင့်တွင် ရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ထံမှကြားလိုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်လိပ်စာ- editor@globalindian.com
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်များ
ကွဲပြားမှုကို ဖြစ်စေသော စိတ်ကူးများ၊ အစပျိုးမှုများနှင့် ပရောဂျက်များ
Kentucky မှအိန္ဒိယအမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်သည့် အသက် 13 နှစ်အရွယ် Athena Singh သည် မကြာသေးမီက Lexington Junior City Championship တွင် Girls 16-18 ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူမသည် ပြိုင်ပွဲဝင် ၁၄၀ ဖြင့် ၁၄ ကြိမ်ရိုက်ချက်ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သည်။
Priyanshi Somani၊ လူသားဂဏန်းတွက်စက်
လူသားဂဏန်းတွက်စက်ဟု လူသိများသော ဆိုမာနီသည် 2010 ခုနှစ်တွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုကမ္ဘာ့ဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည့် အသက်အငယ်ဆုံး အိန္ဒိယဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုမှနေ၍ ဆုများစွာကို ရယူခဲ့ပြီး Limca Book of World Records တွင် လိုချင်တပ်မက်ဖွယ်ရာနေရာကို ရရှိခဲ့သည်။
Medha Priya၊ အစိမ်းရောင်ဗိသုကာပညာရှင်
Green Building Analyst အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသော ဗိသုကာပညာရှင် Medha Priya သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံးဝထိခိုက်မှုမရှိသော အရင်းအမြစ်များ သက်သာသော အဆောက်အအုံများ ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်သည်။ ယခု သူမသည် Net Zero Energy Buildings အတွက် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု အစီအစဉ်ဗျူရိုတွင် အလုပ်လုပ်နေပါသည်။
Vancouver တွင် Rajasthani အစားအစာကို ကျွေးမွေးပြီး တောင်အာရှအမျိုးသမီးများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးသည်။
Nidhi Tomer Chaudhary၊ တည်ထောင်သူ Tatta Chulha
သူမ၏ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်၊ Nidhi Tomer Chaudhary သည် dal baati choorma နှင့် moongdal pakoda ကိုအိမ်မှပြန်လာရန်အလိုရှိခဲ့သည်။ သူမနေထိုင်တဲ့ Vancouver မှာ Tatta Chulha ကို ငွေကြေးလွတ်လပ်ခွင့်ကနေတဆင့် စွမ်းဆောင်နိုင်စေဖို့ တောင်အာရှအသိုင်းအဝိုင်းက အမျိုးသမီးတွေကို ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။
ရင်သားကင်ဆာ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
Dheepthi Mohanraj၊ သုတေသနပညာရှင်
American Junior Academy of Science ၏ ဖော် ဆောင်သူ ၊ Presidential Scholar 2022 သည် ရင်သားကင်ဆာ ဝေဒနာရှင် များတွင် ကျန်နေသေးသော ရောဂါ အကဲဖြတ်ခြင်း နည်းလမ်း နှင့် ရင်သား ကင်ဆာ ခန့်မှန်း နိုင်မှု အတွက် mitosis ကို ရှာဖွေခြင်း နည်းလမ်း အပါအဝင် ပရောဂျက် များ ကို လုပ်ဆောင် ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနွယ်ဖွားဆရာဝန်သည် ကျော်ကြားသော လီကွမ်းယူ ပညာသင်ဆု ရရှိသည်။
အသက်နှစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်ရှိ ပရီမီခသည် Covid-19 ကာလအတွင်း ကာကွယ်ဆေးနှင့် ကုသရေးများလက်လှမ်းမီရန် အာမခံချက်ပေးသည့် ထူးချွန်စင်္ကာပူနိုင်ငံသားများအား ပေးအပ်သည့် Lee Kuan Yew ပညာသင်ဆု ရရှိသူ သုံးဦးထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် ယခုနှစ်တွင် Johns Hopkins တက္ကသိုလ်သို့ သွားမည်ဖြစ်သည်။
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | ထို့နောက် & ယခု
Salima Tete၊ အိန္ဒိယဟော်ကီကစားသမား
သူမ၏မိဘများလယ်သမားများအဖြစ်လုပ်ကိုင်သည့် Jharkhand ၏ Simdega ခရိုင်ရှိရွာငယ်လေးမှသူမ၏ခရီးစဥ်တွင်အိန္ဒိယဟော်ကီကစားသမားသည်ခရီးဝေးသို့ရောက်ခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ အိုလံပစ်ကစားသမားသည် သူမ၏အစပြုသည့်နေ့ရက်များအတွင်း ရွှံ့မြေပေါ်တွင် ခြေဗလာလေ့ကျင့်လေ့ရှိသည်။
Kashmir မှ Ayesha Aziz- အိန္ဒိယ၏ အသက်အငယ်ဆုံး အမျိုးသမီး လေယာဉ်မှူးနှင့် တွေ့ဆုံပါ။
Ayesha Aziz၊ လေယာဉ်မှူး
အသက် 25 နှစ်အရွယ် Ayesha Aziz သည် နိုင်ငံအတွင်း အသက်အငယ်ဆုံး အမျိုးသမီး လေယာဉ်မှူး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 2011 ခုနှစ်တွင် Ayesha Aziz သည် အသက် 15 နှစ်တွင် လိုင်စင်ရရန် အသက်အငယ်ဆုံး ကျောင်းသား လေယာဉ်မှူး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
စွန့်ဦးတီထွင်သူမှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက်သည့် ကလေး
Praveen Kumar Gorakavi ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ၊ The Phi Factory & Microbite
အသက် 13 နှစ်တွင် Praveen သည် အနှစ် 40,000 အတွက် ပြက္ခဒိန်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး Braille ဖြင့် ပြန်ဆိုခဲ့သည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ခြေထောက်အတုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘရိတ်ကိရိယာကိုလည်း တီထွင်ခဲ့သည်။ ကလေးပီသသောကလေးသည် The Phi Factory တွင် သူ၏စီးပွားရေးအိပ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် PhD ပရိုဂရမ်မှ ထွက်ခဲ့သည်။
ဆံပင်ညှပ်သူသည် သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာသူနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
Ramesh Babu၊ ဆံပင်ညှပ်
Bengaluru မှ ဆံပင်ညှပ်သူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ပထမဆုံးကားကို 1994 ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ငွေကြေးအလုံအလောက်ချွေတာပြီးနောက် မကြာမီတွင် ၎င်းကို အငှားဖြင့်စတင်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ၎င်း၏လုပ်ငန်းကို ကြီးထွားလာစေခဲ့သည်။ ယခုသူသည် ဇိမ်ခံကားအစီး ၄၀၀ ကျော်ပိုင်ဆိုင်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဘီလီယံနာ ၁၄၀ ထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
Indian Statistical Institute (ISI) ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ Sangita Bandyopadhyay သည် ကာလကတ္တား၊ ဒေလီ၊ Bangalore၊ Chennai နှင့် Tezpur ရှိ ISI စင်တာ ၅ ခုလုံးကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပါသည်။5ခုနှစ်တွင်သူမ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက် Padma Shri ထံအပ်နှင်းခဲ့သည်။
စီးပွားရေး သူဌေးကြီးတွေရဲ့ ဥက္ကာပျံတွေ တိုးလာတယ်။
Zscaler၊ CEO နှင့် တည်ထောင်သူ Jay Chaudhary
Zscaler ၏ CEO နှင့် တည်ထောင်သူ Jay Chaudhary သည် Himachal Pradesh ရှိ ရွာလေးတစ်ရွာမှ ကြိုဆိုနေပါသည်။ သူသည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီကို 2007 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 2021 တွင် IIFL Wealth Hurun India Rich list 10 တွင် India ၏ ထိပ်တန်းအချမ်းသာဆုံး 2021 ယောက်တွင် နေရာတစ်ခုရခဲ့သည်။
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | စတင်သူများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ
Avani Cosmetics Pvt Ltd ၏ CEO ဖြစ်သူ Avani Shantanu Dixit
အသက် 23 နှစ်အရွယ် စွန့်ဦးတီထွင်သူ၊ ကျော်ကြားသူများ၊ ပရဟိတသမားနှင့် သြဇာအာဏာရှိသူ Avani Shantanu Dixit သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးထူးခြားသော အီတလီနိုင်ငံထုတ် Sephora သန့်ရှင်းဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် အလှကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် Avanii ကို မကြာသေးမီက မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
စီအီးအိုနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် အိန္ဒိယသားလေး
Paul၊ ဟက်ကာ၊ အက်ပ်တီထွင်သူ၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူနှင့် ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ Prudent Games ၏ CEO များအားလုံးသည် တစ်သားတည်းဖြစ်လာသည်။ ဒီ jack-of-all-trades အလုပ်မလုပ်တဲ့အခါ၊ သူကိုယ်တိုင်က ကွန်ပျူတာ လုံခြုံရေးကို လေ့လာတာ၊ ကွန်ဖူးနဲ့ ဂီတကို သင်ယူခြင်းနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။
ဒီမိုကရက်တစ် startup ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
Krishna Maggo, တည်ထောင်သူ, Sateeq
အသက် 16 နှစ်အရွယ်၏ပလပ်ဖောင်း Sateeq သည် ₹5000 သေးငယ်သောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများဖြင့် နတ်သမီးလေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖြစ်လာစေမည့် startup wave ကိုစီးနင်းလိုသူတိုင်းကို ကူညီပေးပါသည်။ လည်ပတ်မှုစတင်ပြီး တစ်လအတွင်း အနည်းဆုံး Pre-Series A ရန်ပုံငွေရှာပွဲအတွက် စုဆောင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီ 10 ခုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
SUGAR အလှကုန်သည် စီးရီး D ရန်ပုံငွေအတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ စုဆောင်းခဲ့သည်။
Vineeta Singh, တည်ထောင်သူ, SUGAR အလှကုန်
အိန္ဒိယအလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် L Catterton ဦးဆောင်သော ၎င်း၏စီးရီး D ရန်ပုံငွေပွဲ၌ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ စုဆောင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီအား အများသူငှာ လုပ်ဆောင်မည့် အစီအစဉ်သို့ ခြေတစ်လှမ်း ပိုမိုနီးကပ်စေပါသည်။
Harshita Lalchand နှင့် Tushika Lalchand တည်ထောင်သူများ၊ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
Visakhapatnam တွင် မိခင်-သမီး နှစ်ယောက်က တည်ထောင်ထားသည့် startup သည် စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်စပ်နေသော လူမှုရေး အမည်းစက်များကို ဖျောက်ဖျက်ရန်နှင့် ခက်ခဲသော အဆင့်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ၎င်းကို ဆွေးနွေးပြီး အကူအညီ ရယူရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း အလေးထားပြီး အသိပညာ မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
KSUM ကျောထောက်နောက်ခံပြု ဇီဝနည်းပညာလုပ်ငန်းစတင်သည့်လုပ်ငန်းသည် US ကုမ္ပဏီထံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အာမခံပါသည်။
Zaara Biotech၊ စတင်မှု
ဇီဝနည်းပညာလုပ်ငန်းစတင်သည့် Zaara Biotech သည် Kerala Startup Mission ၏ အထင်ကရ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစင်တာ အစီအစဉ်အောက်တွင်၊ စတင်တည်ထောင်သူ၏ ရေညှိပင်လယ်ကို ထူထောင်ရန်အတွက် US အခြေစိုက် Transcend International မှ မဖော်ပြသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကို ရရှိထားသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ | လူငယ် | ယဉ်ကျေးမှု
Megan Suri၊ အိန္ဒိယ အမေရိကန် မင်းသမီး
Mindy Kaling က Never Have I Ever နဲ့ လက်တွဲပြီး ကြီးမားတဲ့ ကြေငြာချက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ အသက် 23 နှစ်အရွယ် မင်းသမီး Megan Suri ဟာ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီးသည် မကြာသေးမီက မင်းသား Storm Reid နှင့်အတူ Searching2ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဂန္တဝင်အကပုံစံများကို ကမ္ဘာ့ပလက်ဖောင်းများသို့ ယူဆောင်ခြင်း။
Ameya Lagudu၊ ဂန္တဝင်အကသမား
Ameya သည် အကဖြင့် အိန္ဒိယအနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို ကမ္ဘာ့ပလက်ဖောင်းများသို့ ယူဆောင်သွားရန် ရည်ရွယ်သည်။ သူမသည် ပါဝင်သူ 10 ဦးဖြင့် အကြီးဆုံး Kuchipudi အတွက် ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန် အပါအဝင် ကမ္ဘာ့စံချိန် 6,117 ခုနှင့် Bharatanatyam ဖျော်ဖြေမှုအတွက် Asia Book of Records သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
Nishaad Shah၊ အိန္ဒိယ-အမေရိကန် ဂီတပညာရှင်
New York အခြေစိုက် ကလေးအနုပညာရှင် Nishaad Shah သည် တက်သစ်စအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် အကောင်းဆုံး ကလေးအယ်လ်ဘမ် အမျိုးအစားတွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ရရှိခဲ့သည့် A Colorful World အယ်လ်ဘမ်တွင် အဆိုတော်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။
Abhijita Gupta, စာရေးဆရာ
Ghaziabad ဇာတိ Abhijita Gupta သည် ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး စာရေးဆရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမကို International Book of Records က အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ သူမသည် Happiness All around, We will Sustain and To begin with…The little things.
Kohn ပြခန်းသည် အိန္ဒိယအနုပညာရှင်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
Siji Krishnan၊ အနုပညာရှင်
Kohn Gallery သည် အိန္ဒိယအနုပညာရှင် Siji Krishnan ၏ကိုယ်စားပြုမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Kerala တွင်နေထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေသော Krishnan သည် ဆောင်းဦးရာသီတွင် Kohn Gallery နှင့်အတူ ၎င်း၏ပထမဆုံးသော US တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲကို 2023 ခုနှစ်၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
UAE ရှိ Bharatnatyam အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း။
Prakriti Suresh၊ Bharatnatyam အကသမား
Sharjah အခြေစိုက် 13 နှစ်သားသည် Bharatnatyam နှင့် Carnatic ဂီတကိုကမ္ဘာသို့ယူဆောင်နေသည်။ Trichy မှမူလအားဖြင့်သူမသည် UAE တွင်ကျင်းပသော Markazhi ပွဲတော်တွင်ချန်ပီယံဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | ပြခန်း
ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် Soumya Ranjan Biswal သည် မကြာသေးမီက Odisha ကမ်းခြေတစ်ခုတွင် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကမ်းခြေသန့်ရှင်းရေး စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
24 ဇွန် 2022
Indian Paralympian Niranjan Mukundan သည် International Yoga Day ၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ပုံရိပ်ကို မျှဝေထားသည်။ "ယောဂသည် ဘဝလမ်းစဉ်" ဟု တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။
23 ဇွန် 2022
RCB ပိုင်ရှင်ဟောင်း Vijay Mallya သည် ခရစ်ကတ်သမား Chris Gayle နှင့် အမီလိုက်နေသည်။
21 ဇွန် 2022
Pakistan ၏ 'ထရပ်ကားအနုပညာ' - အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် Moosewala အား အထူးဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် စီးနင်းမှု
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် Afroz Shah သည် Femina Miss India ပြိုင်ပွဲဝင်များနှင့်အတူ မွမ်ဘိုင်းတွင် သမုဒ္ဒရာသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်း စုစုပေါင်း အဏ္ဏဝါအပျက်အစီး ကီလိုဂရမ် ၁၀၀၀ ကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
18 ဇွန် 2022
Indian History Pics ၏တရားဝင်ကိုင်တွယ်သူသည် ပထမကမ္ဘာစစ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် အိန္ဒိယတိုက်လေယာဉ်မှူး Hardit Singh Malik ၏ပုံကို မျှဝေခဲ့သည်။
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | ဗီဒီယိုများ
Nina Davuluri သည် အလှဘုရင်မတစ်ဦးအဖြစ် သူမ၏ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို မျှဝေကြည့်ရှုပြီး မျက်နှာပြင်အောက်တွင် ပို၍ရှိနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို သတိပေးသည်။ အရေပြားအရောင်နှင့် ထိတွေ့နိုင်သော ယဉ်ကျေးမှုတွင် ကြီးပြင်းလာသူ Nina သည် အသားအရေ တောက်ပမှုလုပ်ငန်းနှင့် အလှအပစံနှုန်းများကို မည်ကဲ့သို့ လွှမ်းမိုးနေသည်ကို အထူးသတိပြုမိပါသည်။
25 ဇွန် 2022
LIFT 2007 တွင် မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ် Sugata Mitra သည် သူ၏ Hole in the Wall ပရောဂျက်အကြောင်း ဆွေးနွေးသည်။ ဤပရောဂျက်ရှိ ကလေးငယ်များသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် PC ကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် — ထို့နောက် အခြားကလေးများကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ က​လေး​တွေ သူတို့ကိုယ်​တိုင်​ ဘာ​တွေ သင်​​ပေးနိုင်​​သေးလဲလို့​မေးတယ်​။
Ted Talks ကို ကြည့်ရှုရပါမည်။
ဖွံ့ဖြိုးရေးလေ့လာရေး ပထမနှစ် Master in Development Studies ကျောင်းသားဖြစ်သည့် ဗြိတိသျှ-အိန္ဒိယ Shefali Nandhra သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ကို တည်တံ့ခိုင်မြဲစေမည့် လူငယ်များ၏ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုချက်တစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ပါသည်။
Aditi Prasad သည် India ရှိ မျိုးဆက်သစ် coders များအတွက် ပရိုဂရမ်နှင့် နည်းပညာကို မိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက် Indian Girls Code ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူသည် ကုဒ်နှင့် စက်ရုပ်များကို အသုံးပြု၍ Trichy ရှိ မိဘမဲ့ဂေဟာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော မိန်းကလေးများကို ခွန်အားပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။
22 ဇွန် 2022
Gitanjali Rao ၏ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၊ မိန်းကလေးများအတွက် STEM ပညာရေးနှင့် ယနေ့ ကလေးဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်တို့ကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
19 ဇွန် 2022
စောင့်ကြည့်ပါ- IAS အရာရှိ Tina Dabi က ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်၊ ဆည်းပူးပြီး ဉာဏ်အဖြစ် (အသက်အရွယ်ကို နံပါတ်တစ်) အနိုင်ယူပါလို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘဝတွင် ကြီးမြတ်သော အမြင့်သို့ရောက်ရန် သင်ယူရင်း မိတ်ဖွဲ့ရမည်၊ အကျပ်ရိုက်မှု၏ အကိုင်းအခက်များနှင့် ကျင်းများအတွင်း အောင်ပွဲများ ပေါ်ထွက်လာသည်။
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | ဖတ်ကောင်းသည်။
အင်တာနက်မှ စုစည်းထားသော ထိပ်တန်းဖတ်ရှုမှုများ
အလုပ်ရှိအမျိုးသမီးများ- ကျား-မ လစာကွာဟချက်ကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ပေါင်းကူးပေးနိုင်မလား။ – Forbes
စာဖတ်ချိန် - 8 မိနစ်
India – India Today တွင်နေထိုင်သော ထိပ်တန်းနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များမှ အမွှာသင်တန်းကို သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း။
ဆန့်ကျင်ဘက် - လောင်စာဆီ တည်ထောင်ခြင်း။
Disha Nawani နှင့် Vivek Kumar ရေးသည်- Covid ပြီးနောက်၊ ကျောင်းများသည် ကျောင်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမည် - The Indian Express
အိန္ဒိယ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အချက်အလက်-Scroll.in ကို တူးဖော်ရန် ငါးနားရွက်များကို တူးဖော်နေကြသည်။
မြင်ကွင်း- EdTech – The Economic Times တွင် လမ်းပြရန် အိန္ဒိယကို ကမ္ဘာက ကြည့်နေသည်။
(ဤဆောင်းပါးသည် ဦးစွာပေါ်လာသည်။ Forbes မဂ္ဂဇင်း ဇွန်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်)
On Twitter၊ @PayGapApp သည် UK အစိုးရ၏ ကျားမ လစာကွာဟမှု ဝန်ဆောင်မှုဒေတာဘေ့စ်တွင် ဖော်ပြထားသော ကုမ္ပဏီများတွင် ကျား-မ ဝင်ငွေကွာဟမှုကို ခေါ်ဆိုသည့် bot အကောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇွန်လ 20 ရက်နေ့တွင် နည်းပညာကုမ္ပဏီ Tech Mahindra က LGBTQ+ ပါဝင်ခြင်းအကြောင်း တွစ်တာတင်သောအခါ “ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပျမ်းမျှတစ်နာရီလုပ်ခဟာ အမျိုးသားတွေထက် 1.2 ရာခိုင်နှုန်း နိမ့်တယ်” လို့ တွစ်တာမှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
(ဤဆောင်းပါးသည် ဦးစွာပေါ်လာသည်။ အိန္ဒိယယနေ့တွင် ဇွန်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်) ယူကေ၊ ဂျာမနီ၊ တောင်အာဖရိက၊ ဩစတေးလျနှင့် စကော့တလန်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများမှ ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း 50 နီးပါးသည် အမွှာသင်တန်းများနှင့် ပူးတွဲနှင့် ဒီဂရီနှစ်ရပ်ကို ပေးဆောင်ရန် အိန္ဒိယတက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
(ဤဆောင်းပါးသည် ဦးစွာပေါ်လာသည်။ လောင်စာဆီတည်ထောင်ခြင်း။ ဇွန်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်)
Sridhar Vembu သည် သမားရိုးကျ ဉာဏ်ပညာကို မေးခွန်းထုတ်ခြင်းဖြင့် Zoho ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အချိန်အကြာဆုံးကို ဘယ်သူမှ သိပ်သတိမထားမိကြဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု လူတွေက သူ့ကို ဘာနဲ့ Zoho က ကလိပေးတာလဲ သိချင်နေကြပြီ။
(ဤဆောင်းပါးသည် ဦးစွာပေါ်လာသည်။ အိန္ဒိယ Express ကို ဇွန်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်)
Covid ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာသင်ယူမှု အကျပ်အတည်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ အမျိုးသားအောင်မြင်မှုစစ်တမ်း (NAS) သည် သင်္ချာမှ လူမှုသိပ္ပံအထိ ဘာသာရပ်များတွင် ကျောင်းသားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် 2017 နှင့် 2021 ခုနှစ်အကြား ကိုးရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းသွားသည် (IE၊ မေ 25)။ ဤအကျပ်အတည်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ် တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော သင်ကြားရေးပတ်ဝန်းကျင်မရှိခြင်းကြောင့် သင်ယူမှုဆုံးရှုံးမှုသည် အိမ်တွင်ပညာရေးထောက်ပံ့မှုမရှိသောကလေးများနှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်လည်း ကန့်သတ်ခံရသောကလေးများနှင့် ပိုမိုသက်ဆိုင်ပုံရသည်။ .
(ဤဆောင်းပါးသည် ဦးစွာပေါ်လာသည်။ Scroll.in ဇွန်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်)
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အပူချိန်ကဲ့သို့ ငါးနားရိုးများ (otoliths) မှ ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု မြင့်မားသော အချက်အလက်များသည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရာသီဥတုပုံစံများကို အားကောင်းစေနိုင်သည်...
(ဤဆောင်းပါးသည် ဦးစွာပေါ်လာသည်။ အဆိုပါစီးပွားရေးဇုန် Times သတင်းစာ ဇွန်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်)
၂၀၀၆ ခုနှစ် အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဝါရှင်တန်ရှိ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အပတ်စဉ်အစည်းအဝေးအပြီးတွင် အာဖရိကနှင့် လက်တင်အမေရိကမှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအချို့သည် အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်တစ်ခုကို ဆွေးနွေးရန် ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ရုံးခန်းသို့ ပြန်လာခဲ့ကြသည်၊၊ ကျွန်ုပ်သည် သူတို့ကို ကူညီနိုင်မလား။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ သင်္ချာနှင့် သိပ္ပံဘာသာရပ်များကို သင်ကြားရန် ဆရာကောင်းအနည်းငယ်ကို ၎င်းတို့နိုင်ငံမှ ရရှိ...
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | နံပါတ်များဖြင့် ကမ္ဘာ
University Grants Commission (UGC) ကို စိတ်ဝင်စားသော နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များ၏ အရေအတွက်သည် အိန္ဒိယနှင့် နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များအကြား အမွှာ၊ ပူးတွဲဒီဂရီနှင့် ဘွဲ့နှစ်ခုအစီအစဉ်များအတွက် စည်းမျဉ်းအသစ်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယရှိ ဥာဏ်ရည်တု (AI) အပလီကေးရှင်းများတွင် ပြုလုပ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် လာမည့်နှစ်တွင် ဒေါ်လာ ၈၈၁ သန်းအထိ တိုးလာရန် 30.8% ဖြင့် နှစ်စဉ် တိုးလာမည်ဟု စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ National Association of Software and Services Companies အရ သိရသည်။
စတန်းဖို့ဒ်ကျောင်းထွက်ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် Kaivalya Vohra နှင့် Aadit Palicha တို့၏ 10 မိနစ်စာပေးပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုစတင်သည့် Zepto ၏တန်ဖိုး။
Bengaluru တစ်ခုတည်းတွင် 2022 ခုနှစ်တွင် နည်းပညာအကျိုးတူရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွင် ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေစုစုပေါင်းပမာဏ။
300 ကျဉ်းမြောင်းသော ဂျက်လေယာဉ်များ
Air India က အော်ဒါမှာဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ဂျက်လေယာဉ် အရေအတွက်ဟာ စီးပွားဖြစ် လေကြောင်းသမိုင်းမှာ အကြီးဆုံး အမှာစာတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Tatas လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံတကာခရီးသည်စျေးကွက်ဝေစုကို ပြန်လည်ရရှိရန် လာမည့် လေးနှစ် သို့မဟုတ် ငါးနှစ်အတွင်း အဲအိန္ဒိယယာဉ်စုသို့ ပေါင်းထည့်မည်ဖြစ်သည်။
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | မင်းသိလား?
အိန္ဒိယနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယလူမျိုးများအကြောင်း ပျော်စရာဖြစ်ရပ်မှန်များ
အိန္ဒိယ-အမေရိကန် နာဆာ အာကာသယာဉ်မှူး Sunita Williams သည် နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းသို့ ၎င်း၏ ပထမဆုံး သင်္ဘောသား မစ်ရှင်တွင် Boeing ၏ Starliner ကို စမ်းသပ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ မစ်ရှင်ကို Commander Barry “Butch” Wilmore မှ ဦးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
အသက် 23 နှစ်အရွယ် Jehan Daruvala သည် လက်ရှိ FIA ဖော်မြူလာ2စီးရီးတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ တစ်ဦးတည်းသော ပါဝင်သူဖြစ်ပြီး ဖော်မြူလာ 1 ကို မရောက်ရှိမီ နောက်ဆုံးအဆင့်ဟု လူအများက ယူဆခဲ့ကြသည်။
2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် Sonia Raman သည် NBA တွင် နည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသော ပထမဆုံး အိန္ဒိယနွယ်ဖွား အမျိုးသမီး ဖြစ်လာခြင်းဖြင့် သမိုင်းကို ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခဲ့သည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမသည် MIT တွင် အမျိုးသမီးဘတ်စကတ်ဘောအသင်း၏ နည်းပြချုပ်ဖြစ်သည်။
မလေ့လာမီ မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့် ယောဂကျင့်ခြင်းသည် အာရုံစူးစိုက်မှု အားကောင်းစေပါသည်။ ပြင်းထန်သော ယောဂကျင့်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်မှ ဦးနှောက်သို့ သွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး မှတ်ဥာဏ်နှင့် သင်ယူမှုများအတွက် တက်ကြွသောဆဲလ်များ ကြီးထွားမှုကို အားကောင်းစေသည်။
တောင်အာဖရိကသမိုင်းပညာရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Ismail Vadi ၏ 'Lions of Lenasia' စာအုပ်အသစ်သည် Lenasia ရှိ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှ 1980 ခုနှစ်များ၏ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတွင် အိန္ဒိယလူငယ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ အများအပြားသည် နေ့စဉ် ရထားလမ်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ နေ့စဉ် လူပေါင်း ၂၃ သန်းကျော် တင်ဆောင်နိုင်သော ရထား ၁၂,၆၁၇ စင်း ပြေးဆွဲလျက်ရှိသည်။
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | ကိုးကားချက်များ
မယ်လ်ကွန် Forbes၊ ထုတ်ဝေသူ၊ Forbes မဂ္ဂဇင်း
ပညာရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အချည်းနှီးသောစိတ်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖြင့် အစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။
Robert H. Schuller၊ အမေရိကန် ခရစ်ယာန် ရုပ်သံဆရာ၊ သင်းအုပ်ဆရာ
ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေက ဘယ်တော့မှ မတည်မြဲပေမယ့် ခက်ခဲတဲ့လူတွေကတော့ လုပ်ကြပါတယ်။
အဲဒါတွေကို ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို မလုပ်ရင် အိပ်မက်တွေက မင်းခေါင်းကို ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ လျှပ်တပြက်တွေချည်းပါပဲ။
နက်ဖြန်သေရသကဲ့သို့ အသက်ရှင်ပါ။ ထာဝရအသက်ရှင်နေသကဲ့သို့ သင်ယူပါ။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ အလွန်နည်းလွန်းတဲ့ ကြားမှာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။
Ernest Hemingway၊ အမေရိကန်ဝတ္ထုရေးဆရာ
ရဲရင့်ခြင်းသည် ဖိအားအောက်တွင် ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | STEM တွင်မိန်းကလေးများ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံမေဂျာတစ်ခုဖြစ်သည့် အသက် 21 နှစ်အရွယ် အိန္ဒိယအမေရိကန်လူမျိုး Anjika Pai သည် 2022 University Medal ဆုရှင်ဖြစ်ပြီး ဘွဲ့လွန်စီနီယာများအတွက် အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ Anjika သည်လည်း ဆုရဝဘ်ဆိုဒ် STEM Redefined ကို ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သည်။
Smiti တွင် 'အားသာချက်' ရှိသည်
Smiti Bhatt Deora သည် HRTech startup Advantage Club ကို 2014 ခုနှစ်တွင် သူမ၏ခင်ပွန်း Sourabh နှင့်အတူ ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းများ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် AI-enabled platform ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Smiti သည် UCLA ၏ ကျောင်းသားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကွန်ပြူတာသိပ္ပံတွင် မဟာဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်သည်။
လက်ထောက်ပါမောက္ခ Pranita P Sarangi၊
ဒေါက်တာ Pranita P Sarangi သည် ဇီဝဗေဒသိပ္ပံနှင့် ဇီဝအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခဖြစ်သည်။ ဆဲလ်လူလာနှင့် မော်လီကျူး ခုခံအားစနစ်၊ ခုခံအားရောဂါဗေဒ၊ နှင့် ကိုယ်ခံအားဆိုင်ရာ ကင်ဆာရောဂါဗေဒတို့သည် သူမစိတ်ဝင်စားသည့် နယ်ပယ်အချို့ဖြစ်သည်။
ဤ Bengaluru ကျောင်းသူလေး၏ ဆန်းသစ်ဆန်းသစ်သော အာကာသအခြေပြု ပရောဂျက်များသည် 2016 မှစတင်၍ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော NASA Ames Space Settlement Contest ကို အနိုင်ရအောင် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
Kamala Sohonie၊ ဇီဝဓာတုဗေဒပညာရှင်
ရူပဗေဒပညာရှင် CV Raman မှ IISC တွင် ဝင်ခွင့်ငြင်းပယ်ခံရပြီး အမျိုးသမီးများသည် အရည်အချင်းပြည့်မီသည်ဟုမထင်သောကြောင့် Sohonie သည် အိန္ဒိယ၏ပထမဆုံးသောအမျိုးသမီးဇီဝဓာတုဗေဒပညာရှင်ဖြစ်လာပြီး 1939 ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယ၏စားသုံးသူလမ်းညွှန်မှုအသင်း (Consumer Guidance Society of India) ကိုပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။
မိန်းကလေးများအတွက် IBM STEM
IBM Corp သည် အရှေ့မြောက်ပြည်နယ် 250 ခရိုင်ရှိ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းပေါင်း 15 ကျော်တွင် 'IBM STEM for Girls' ပရိုဂရမ်ကို မိတ်ဆက်ရန် ကျောင်းပညာရေးဌာန၊ Nagaland နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | ဘာကြောင့်လဲ ပြောပြပါ။
အင်ဒိုနီးရှား၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရင်းဗီဇာသည် ခေတ်စားနေပါသလား။ ဝေးလံခေါင်သီသော အလုပ်သမားများကို အခွန်ကင်းလွတ် နေထိုင်ခွင့်ပြုမည့် ၅ နှစ်ဗီဇာကို မိတ်ဆက်ပေးရန် စီစဉ်နေပြီး ၎င်းတို့၏ ၀င်ငွေများသည် အင်ဒိုနီးရှားပြင်ပရှိ ကုမ္ပဏီများမှ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
အိန္ဒိယသည် 500 ခုနှစ်တွင် 5G စာရင်းသွင်းမှု သန်း 2027 ရှိလိမ့်မည် ။ အိန္ဒိယဒေသရှိ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလျှင် ပျမ်းမျှဒေတာသွားလာမှုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 20 ခုနှစ်တွင် တစ်လလျှင် 2021GB မှ 50 ခုနှစ်တွင် တစ်လလျှင် 2027GB ဝန်းကျင်အထိ တိုးလာရန် ခန့်မှန်းထားသည် - CAGR 16 ရာခိုင်နှုန်း။
Anand Mahindra က ခေတ်စားနေလား။ Mahindra Group ဥက္ကဌသည် အစိုးရ၏ Agneepath အစီအစဉ်တဝိုက်တွင် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ရပြီး "ထူးမြတ်သော အလုပ်ရှင်" Agniiveers များကို ပျော်ရွှင်စွာ ငှားရမ်းမည်ဟု ပြောဆိုခြင်းဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုသူအချို့ကို မှားယွင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် မဟိန္ဒရာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌက ပွတ်သပ်ခဲ့သည်။
44 ကြိမ်မြောက် စစ်တုရင် အိုလံပစ်ပွဲ ခေတ်စားနေလား။ ဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီသည် ဇူလိုင် ၂၈ ရက်မှ စတင်ကာ Mahabalipuram တွင် ကျင်းပမည့် အကြီးစား စစ်တုရင်ပွဲအတွက် ပထမဆုံး မီးရှူးတိုင်လွှင့်တင်မှုကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်သည် စစ်တုရင်၏မူလအစနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပျံ့နှံ့သွားပုံတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
Microsoft က Internet Explorer ကို ဘာကြောင့် ပိတ်တာလဲ။ Microsoft ၏ အဆိုအရ Internet Explorer ၏ တိုးမြင့်တိုးတက်မှုများသည် ဝဘ်နှင့် ကြီးမားသော တိုးတက်မှုများနှင့် မယှဉ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သန့်ရှင်းသော slate ဖြင့် စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဖေ Earl K Fernandes က ဘာကြောင့် သတင်းကြားနေရတာလဲ။ အိန်္ဒိယအမေရိကန်သည် မကြာသေးမီက အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ ကိုလံဘတ်စ်မြို့ ရိုမန်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်၏ 13th ဆရာတော်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသည်။ သူသည် ထိုအခန်းကဏ္ဍတွင် ပထမဆုံး အသားအရောင်ရှိသူဖြစ်ပြီး ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏ ပထမဆုံးသော အိန္ဒိယနွယ်ဖွား ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်သည်။
GLOBAL အိန္ဒိယ | လူငယ် | အခွင့်အလမ်းများ
အိန္ဒိယ ကျောင်းသား ၂၃၂,၈၅၁ ဦးသည် ယမန်နှစ်တွင် အမေရိကန်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ၊ ဩစတေးလျတွင် ဘွဲ့နှစ်ဒီဂရီ အစီအစဉ်များကို မကြာမီ စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ကနေဒါမှာ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေ ဘယ်လိုဝင်ငွေပိုရလဲ သိပါရစေ
UK တက္ကသိုလ်သည် STEM တွင်အိန္ဒိယအမျိုးသမီးများအတွက်ပညာသင်ဆုများပေးသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် အစိုးရပညာသင်ဆုအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် ကျောင်းသားများ၏ အစီရင်ခံစာကတ်ကို လိုချင်သည်။
Share & Follow လုပ်ပါ။
Global Indian အကြောင်း
Global Indian –aHero's Journey သည် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့သွားသော အိန္ဒိယလူမျိုးများ၏ ခရီးစဉ်များကို ပြသထားသည့် အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤခရီးများသည် စွန့်စားမှုနှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက် တစ်နည်းနည်းနဲ့ သက်ရောက်မှုရှိသော သတင်းစိတ်ကူးများ၊ အရင်းအနှီး သို့မဟုတ် ကွန်ရက်ဖြင့် အိမ်ပြန်လိုသည့် လူငယ်များကို လှုံ့ဆော်ရန်နှင့် လှုံ့ဆော်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
Global Indians ဖြစ်လိုသော အိန္ဒိယလူငယ်များကို ကူညီပေးနိုင်သည့် စံပြပုဂ္ဂိုလ်များ၊ လမ်းညွှန်ပေးသူများနှင့် အတိုင်ပင်ခံများကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေပါသည်။
© 2021 မူပိုင်ခွင့် The Global Indian // အခွင့်အရေးအားလုံး လက်ဝယ်ရှိသည်။
ဤဆိုဒ်ကို Xavier Augustin မှ ချစ်မြတ်နိုးစွာဖြင့် ဖန်တီးထားပါသည်။